बिचार – Gaindakot Khabar
लघुकथा यसरी शुरू हुन्छ :- राजन त्यो टोलकै धनाढ्य । सबै युरोप लाखौं कमाउँथे । बुढालाई अलि घमन्ड पनि थियो धनको । सधैं बिहान चियापसलमा जाने उनको बानी नै थियो । चियापसलमा...
अशान्त मन र जलिरहेको मुटुबाट भए पनी तिम्रो नाम मा सायद अन्तिम उपहार स्वरुप भाबनारुपी कोसेलीहरू प्रेषित गरेको छु । यो पत्र लेखेर तिमी लाई रूवाउने मन त थिएन तर पनि हेर...
कोरोना मनोवाद हामी सबैको मनमा कुनै न कुनै रूपमा चलेकै छ। बिना उत्तरका प्रश्न चेतन-अवचेतनमा निरन्तर खेलेका छन्— के हुन्छ? कोरोना कहिले सकिन्छ? नेपालमा संक्रमण कति फैलिन्छ? फैलियो भने के हुन्छ? हामी...